Ezigbo Eziokwu Banyere Oru Ahịa Gị | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 17, 2014 Sunday, October 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Mbụ, anyị hụrụ ndị nkwado anyị n'anya Akwụkwọ Ekekọrịta, Ndi kwadoro anyi ọba akwukwo ya na ndi nile nyere anyi aka n’eji ede na ebook. Enwere m ihe mgbawa na-arụ ọrụ na infographic a na ha.
N'ime usoro a, anyị abanyela n'ime ihe kpatara ịre ahịa ọdịnaya anaghịzi abụ ọwa ahịa; ọ bụ n'ezie ntọala nke na-eme ka mbọ niile a na-agba n'ịzụ ahịa. Kedu ihe kpatara, ị nwere ike ịjụ? Ndekọ ọnụ ọgụgụ a nwere ike ọ gaghị eju gị anya. Dabere na Mkpebi Sirius:
Ndị ahịa B2B kpọtụrụ onye na-ere ahịa naanị mgbe 70% nke mkpebi ịzụta mechara.
Ka anyị chee echiche banyere nke ahụ maka otu nkeji. Nke ahụ pụtara na tupu atụmanya ọ bụla dị njikere ịgwa ndị ahịa gị okwu, ha na-eme nyocha, na-ebudata ma na-emekọrịta ọdịnaya gị n'ụzọ ụfọdụ iji kpebie ma ị ga-abụ onye ga-eme ihe. Nke ahụ buru ibu!
Nsogbu ozo bu na, obuna na ihe niile nchịkọta na ngwa ọrụ dịịrị anyị taa, anyị enwetabeghị visibiliti zuru oke na mbọ anyị n'ihi na ụzọ ntụgharị anaghị adịkarị ọhụụ. Ọ bụ ezie na mmadụ nwere ike ịbịa budata akwụkwọ akụkọ gị, kedu ka ha si bata ebe ahụ? Ha nwere ike ịhụ mgbasa ozi na saịtị ọzọ, wee pịa ka ị gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị, wee gbapụ. Izu abụọ ka nke ahụ gasịrị, ha kpebiri ịmalite iso gị na-elekọta mmadụ. E mesịa, otu ọnwa ka e mesịrị, ha kpebiri ibudata otu n'ime akwụkwọ ọcha gị. Mgbe ị chere na ha na-abịa na saịtị gị ozugbo, n'eziokwu, ha hụrụ gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa abụọ gara aga site na mgbasa ozi. Ọ gaghị aka mma ma ọ bụrụ na ị nwere visibiliti n'ime ụzọ ahụ dum kama karịa mgbe ha budatara akwụkwọ akụkọ ahụ?
Anyị kwesịrị ahụ ngosipụta nke ndị na-ọdịda na ndị na peeji nke. Anyị chọrọ visibiliti ka anyị nwee ike ime mkpebi dị mma. Anyị chọrọ akụkọ ihe mere eme maka atụmanya ka anyị wee nwee ike ịhazi ọdịnaya ha.
Lelee ihe omuma a di egwu site na PaperShare, ma hu na lelee ha maka gi nkesa nkesa!
Tags: Ọbá akwụkwọ ọdịnayacontent Marketingederedeọbá akwụkwọInfographics Ahịaakwụkwọ akụkọihe ngosiwhitepapers